Manchester United oo ku guuleystey koobkeedii 19 ee Premeirship-ka (Sawiro) – SBC
Manchester United oo ku guuleystey koobkeedii 19 ee Premeirship-ka (Sawiro)
Kooxda Manchester United ayaa ku guuleystey koobkeedii 19-aad ee horyaalka English Premiership-ka ka dib markii ay hal dhibic ka heleen kulankoodii ay la ciyaareeen kooxda ay martida u ahaayeen ee Blackburn Rovers.
Goolhahyaha labaad ee Man United Tomasz Kuszczak oo maanta uu soo safay macalin Sir Alex waxaa ka muuqatey qaladaad fara badan isagoo tiro ka dhawr daafaca Man United ay ku dhaarato ee Vidic uu daboolay ceebta goolhayaha, laakiin daqiiqadii 20-aad shayaadiinta cas cas waxaa gool kaga naxsadey ciyaaryahanka Emerton kaasi oo kubad qaabaysan suray shabaqa Man United.
Inkastoo gool lagala hormarey Man United oo ciyaar adag kala kulmeen garoobka Ewood Park kooxda ay martida u ahaayeen ee Blackburn oo qaybtii hore ee ciyaarta ay ku dhamaatey 1-0 oo ay ku hogaaminaysay Blackburn.
Qaybtii dambe ee ciyaarta markii la isku soo laabtey ciyaartoyda Man United waxay qaadeen weerarao kala duwan oo ay ku doonayeen inay isaga reebaan riwaayada ka qabsatey Ewood Park.
Man United ma aanay dhigin rajada inay ciyaarta soo bareejeeso waxaana daqiiqadii 73aad goolhayaha Rovers uu ku galey khalad weerayahanka Manchester United Javier Hernandez iyadoo garsooraha ciyaarta uu sheegay ka dib la tasho uu la sameeyey calanwadaha in ay tahay rigoore taasi oo niyad weyn galisay kooxda shayaadiinta cas cas oo raadinaysay in ay taariikhda EPL galaan oo ay ku guuleystaan koobkoodii 19-aad maadaama ay Liverpool ka haysatao min 18 koob.
Rigooradii loo dhigay Man United ayaa waxaa u saxiixay ciyaaryahanka Wayne Rooney oo kubad qaabaysan dhinaca kale ka dhigay goolhayaha kooxda Blackburn Robertson.
Liverpool waxay haysataa 18 koob iyadoo kii ugu dambeeyey ay guuleysatey sanadkii 1990-kii, waana taasi mida ay Man United doonaysay inay hesho taariikh cusub oo ay u furto horyaalka Ingiriiska.
Dhibicda maanta uu ku qaadey goolka Sir Alex Ferguson waxay siisay darajo ah in uu ku guuleysto koobkiisii 12-aad ee Premier League, waxaana mar uu la hadley SKY Sports in ay tahay maanta maalin weyn oo taariikh cusub ay furtey Manchester United, isagoo amaanay wiilashiisa waxaana uu sheegay in taageerayaasha & ciyaartoyduba ay leeyihiin guushan maanta.
liibaan hassan farah says:
Manta man utd waxaa ay jabisay tariiqda ay livepool dhigtay hada man utd ayaa hogan u ah egland waxaa ay heysata 19 ayay heysata man ut cadoowka ha ka naxaan kooxda aduunka waa man utd